Salama namana. | Professor Poeta
COVID-19, biby fiompy voaozona, maloto, mampidi-doza ary mamono olona, ​​dia mitaky ny fivelomantsika fa tsy ny hisambotra antsika, fa mijanona ao an-tranontsika foana isika raha mbola afaka ary miala fotsiny rehefa tsy misy safidy hafa intsony. Amin’ny tranga ilaina sy faran’izay mafy. Ary rehefa manao izany isika dia manao izany amin’ny fikarakarana rehetra ilaina mba hiantohana ny fiarovana antsika, araka ny torolàlana momba ny Organs Fahasalamana, toy ny fampiasana maska ​​tsara, ny fahadiovan’ny tanana, ny fanasana azy ireo alohan’ny sy aorian’ny sakafo amin’ny savony na DETERGENT. Ny hetsika dia tokony hampiditra ny rantsan-tànana, ny felatanana ary ny vodin-tanana any amin’ny hatotanany. Manaova fomba mitovy amin’izany alohan’ny sy aorian’ny fampiasana fitateram-bahoaka sy ascenseur ary rehefa mifandray ara-batana amin’ny olona na zavatra, ivelan’ny tranontsika isika. Raha tsy mahazo trano fidiovana ianao dia manamora kokoa hatrany ny fananana gel misy alikaola. Rehefa mikohaka sy mievina dia ampiasao tavy hisorohana ny tsiambaratelo tsy ho voafafa eny amin’ny rivotra, ary koa sorohy ny tànana sy ny fandokafana ny tarehy. Aza mikasika ny masonao, ny oronao sy ny vavanao raha tsy madio ny tananao.
Fantatro fa tsy mora velively izany, indrindra ho an’ireo izay, toa ahy, dia anisan’ny antsoina hoe “Groups Risk”, miaina amin’ny fisotroan-dronono ao an-trano, manatanteraka fitokanana ara-tsosialy, lavitra ireo olom-pantatra, namana sy havana. Na izany na tsy izany, lavitra ireo izay tianay hiaraka. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fitazonana ny tenantsika hiasa sy hamokatra ary hitahiry ny fahasalamantsika ara-batana sy ara-tsaina. Mba tsy ho kivy sy / na ho lasa adala isika. Mamaky, manoratra, mijery fahitalavitra aho, mihaino mozika, miditra amin’ny tambajotra sosialy, miantso, toy ny tokony hataon’ny tsirairay. Fa te-hanao bebe kokoa aho. Ary manandrana aho. Manolotra anao ny orinasako amin’ny alàlan’ny tranokalako sy ireo boky, misy amin’ny:
Ireo boky TRAVESSIA, DELAS, DELES ary OPERAÇÃO MUTUM, miaraka amin’ny kinova anglisy CROSSIN, AVY AMIN’izy ireo, IZY ary ny OPERATION MUTUM, navoakan’i Amazon, dia hita ao amin’ny kinova e-book sy Hardcover, hividianana na famakiana maimaim-poana amin’ny alàlan’ny Kindle tsy voafetra amin’ny:
Apetrako aminareo tsirairay avy ny fihinan-drahalahy sy ny firaiketam-po feno fitiavana ahy, mangataka aminareo indrindra, mba hitandrina hatrany. MAMONO izany biby fiompy izany!